Cristiano Ronaldo Oo Weerar Afka Ku Qaaday Tifaftiraha France Football Iyo Abaalmarinta Ballon D’Or
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo oo Weerar Afka ku Qaaday Tifaftiraha France Football iyo Abaalmarinta Ballon d’Or
November 30, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Cristiano Ronaldo ayaa weerar culus ku qaaday ninka soo agaasima abaalmarinta Ballon d”or kaasoo isbuucaan sheegay in hamiga kaliya ee uu leeyahay Cristiano Ronaldo inay tahay inuu waayihiisa ciyaareed soo gabagabeeyo isagoo ka Ballon d’Or badan Lionel Messi.
Xiddiga Manchester United oo 36 sanno jir ah ayaa ku guuleystay kubada dahabka shan jeer halka ninka ay xafiiltamaan ee Lionel Messi uu ku guuleystay lix jeer.
Messi ayaa loo saadaalinayaa inuu caawo ku guuleysto abaalmarinta Ballon d’Or markii 7aad iyadoo Ronaldo uu iska diiday inuu ka qeybgalo xaflada Paris ka dhaceysa.
Abaalmarinta Ballon d’Or waxaa bixisa majalada France Football, iyadoo tifaftiraha majalada uu ka hadlay xafiiltanka u dhaxeeya labada halyeey ee Ronaldo iyo Messi.
Pascal Ferre ayaa u sheegay wargeyska New York Times: “Ronaldo wuxuu leeyahay kaliya hal hami, waana inuu ciyaaraha ka fariisto isagoo ka Ballon d’Or badan Messi, waan ogahay arintaan sababtoo ah isaga ayaa ii sheegay.”
Ronaldo ayaase qoraal dheer uu soo dhigay bogiisa Instagram wuxuu ku sheegay hadalkaas mid been ah isagoo sheegay inuu mar walba jecel yahay ciyaar wanaaga marka loo eego xafiiltanka.
“Natiijada maanta waxay sharaxeysaa hadalkii uu Pascal Ferre sheegay todobaadkii hore, markii uu yiri inaan aniga u sheegay in hamigeyga kaliya uu yahay inaan waayaheyga ciyaareed ku dhameysto anigoo ka Ballon d’Or badan Lionel Messi” ayuu qoray kabtanka Portugal.
“Pascal Ferre been ayuu sheegay, wuxuu magaceyga u adeegsaday inuu isku suuqgeeyo iyo inaan ku suuqgeeyo majalada uu u shaqeeyo.
“Waa wax aan la aqbali karin in shaqsiga mas’uulka ka ah abaalmarinta ugu weyn inuu been sidaan u sheego, wuxuu ixtiraamdarro u muujiyay qof mar walba ixtiraamayay France Football iyo Ballon d’Or.
“Maantana been kale ayuu sheegay, isagoo ka maqnaanshaheyga xaflada ku tilmaamay mid la xiriirta karantiil aan gelin lahaa iyadoo aysan jirin sabab igu kalifeysa karantiil.
“Waxaan mar walba doonayaa inaan u hambalyeeyo kuwa guuleysta, ciyaar wanaag iyo isboortisnimo ayaan ku dhaqmayay waayaheyga ciyaareed oo dhan, qofna kama soo horjeedo.
“Waxaan mar walba u guuleystaa nafteyda, kooxaha aan matalayo, waxaan u badiyaa nafteyda iyo kuwa i jecel. Uma guuleysto inaan qof ka soo horjeedo.
“Hamigeyga ugu weyn ee waayaheyga ciyaareed waa inaan koobab kula guuleysto kooxaha aan matalayo iyo xulka qarankeyga.
“Hamigeyga ugu weyn ee waayaheyga ciyaareed waa inaan tusaale wanaagsan u noqdo kuwa ah ama doonaya xirfada kubada cagta.
“Hamigeyga ugu weyn ee waayaheyga ciyaareed waa inaan ka tago iyadoo magaceyga lagu qoray xarfo dahab ah ee taariikhda kubada cagta.